Isixhobo esizenzekelayo sokwenza izixhobo zokugcina irayisi izixhobo ezisetyenzisiweyo / umatshini wokuthengisa irayisi
Olu luhlu lugqibeleleyo oluzenzekelayo lokumila irayisi luyilelwe kwaye lwaphuhliswa ukusuka kumgangatho ophezulu wezinto ezingafunekiyo ngokuhambelana nemigangatho yehlabathi. Esi sidibi somatshini wokucheba i-paddy irayisi sithathelwa ingqalelo kwisityalo esisebenzayo sedreyti yerayisi, iindleko zokubaleka eziphantsi, ulondolozo oluncinci, ubomi benkonzo ende kunye nokuqina okuzinzileyo.
Isityalo seerayisi yinkqubo enceda ekufumaneni ii-hulls kunye nee-bran ezivela kwi-paddy grains ukuze ivelise irayisi ebolileyo. Injongo ye Inkqubo yokugaya irayisi kukususa i-husk kunye neeleyibhile kwi-paddy irayisi ukuvelisa iileyri ezimhlophe zerhasi yonke..
Iimpawu zesityalo sokugaya irayisi
1. Esi sityalo sisebenzayo sisebenzisa irabha esizenzekelayo sineendlela zokwenza umatshini ogudileyo, ukusebenza okulula kunye nokugcinwa okulunge ngakumbi.
2. Esi sityalo somdiliya we-paddy sinokuphelisa ingxaki yokungcoliseka kothuli xa sisondla, Ukuphucula imeko yokusebenza kuyathandeka.
3. umatshini wokukhulisa irayisi unegumbi lokugaya irayisi, umlomo wemitha wenze uphuculo oluyimfuneko ukwenza, amabele e-cereal ngexesha lomqolo ongaphambili, iqondo lobushushu lisezantsi, ukuphucula umgangatho welayisi,isityalo selayisi seerayisi sinokunciphisa umxholo weerayisi oxutywe kakuhle umhle kakhulu.
Idatha yesityalo sokugaya irayisi
800~ I-1000(kg / h)
1 setha indawo yerayisi,1 setha imingxunya yerayisi,1 setha umatshini wokuhlula iinkozo ,1 setha umatshini wokugaya irayisi ,1 setha umatshini wegrader,1 seta inyusi enye ,1 seta kabini inyusi